Shaqaalaha Gargaarka: 56 qof ayaa ku dhintay duqeymo ka dhacay gobolka Tigray
Dadkii ku dhaawacmay duqeynta ciidamada oo lagu daweynayo isbitaalka Shire Shul ee magaalada Dedebit.
Duqeymo cirka ah oo ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay 56 qof, waxaana ku dhaawacmay 30 qof oo kale oo ay caruur ku jiraan, kuwaasi oo ku noolaa xero dadka barakacayaasha ah, sida ay Sabtida maanta ah wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen laba ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo la hadlay maamulka deegaanka iyo dad goobjoogayaal ah.
Afhayeenka ciidamada Gaashaanle Sare Getnet Adane iyo afhayeenka dowladda Legesse Tulu ayaan ka jawaabin codsi ku aaddan in ay dhacdadan ka hadlaan. Dowladda ayaa hore u beenisay in ay dad rayid ah beegsatay muddadii 14-ka bilood ahayd ee uu socday dagaalka ay kula jirto ciidamada Tigreega.
Duqeyntan oo ka dhacday magaalada Dedebit oo ku taal dhanka waqooyi-galbeed ee gobolka Tigray una dhow xudduudda Eritrea, ayaa dhacday xilli dambe oo habeennimadii Jimcaha ah, sida ay sheegeen saraakiisha samafalka oo codsaday in aan magacyadooda la shaacin, maadaama aysan fasax u haysan in ay la hadlaan warbaahinta.
Labada qof ee ka tirsan shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in tirada dadka dhintay ay xaqiijiyeen maamulka deegaanka. Shaqaalahan samafalka ayaa wakaalada wararka ee Reuters u diray sawiro ay ku sheegeen in ay ka qaadeen dadka dhaawaca ah ee ku jira isbitaalka, waxaana dhaawacyada ka mid ah caruur badan.
Ciidamada federaalka Ethiopia ayaa bishii November ee 2020-kii dagaal ku qaaday ciidamada fallaagada ah ee Tigray. Ilaa waqtigii uu dagaalku bilowday, Reuters ayaa soo warisay gabood-fallo ay gaysteen dhinacyada dagaalka, laakin dhinacyada dagaallamaya ayaa beeniyay.